Ho an'ny fiainana feno sy sambatra dia tokony hanana raharaham-barotra ny olona iray mba hahafahan'izy ireo ho variana ary hanome fihetseham-po tsara. Izany no mahatonga ny olona maro ho liana amin'ny zavatra azonao atao mandritra ny fotoananao. Hatramin'izao, misy toerana marobe maromaro izay ahitanao ny tenanao, ny tena zava-dehibe dia ny fisafidianana ny fibodoana marina.
Milaza ny psychologists fa ny tsirairay no mametraka ny fahaiza-manaon'ny tsirairay, ny tena zava-dehibe dia ny mamaritra sy mampivelatra izany. Androany dia afaka mahita ohatra marobe marobe ianao, rehefa mitondra vokatra tsara ny fialam-boly.
Noho ianao afaka mandray anjara:
Ny fitsidihana ireo fianarana. Maro ireo torolàlana samihafa, ohatra, ny feo, ny asa, ny sary, ny fiteny fianarana, sns. Ny fampivoarana ny talentany, ny olona dia tena mahafinaritra tokoa. Ny hafanam-po toy izany dia mety ho lasa asa.
Ny fikarakarana izay azonao atao amin'ny tovovavy iray, tsy azo atao ny miresaka momba ny filalaovana, satria io no endrika malaza indrindra amin'ny fialamboly. Mifidiana ny tari-dalana, araka ny filazan'izy ireo, ny tiany, satria ny habe dia malalaka: embroidery, mitafy, patchwork, manao kilalao, sns. Androany, ny zavatra noforonina ho an'ny tenany, dia malaza be. Ny fanomezam-pahasoavana toy izany dia afaka mahafaly sy mahagaga ny olon-tiany, ary koa manangom-bola amin'ny varotra.
Ho an'ireo izay miaina ao an-tokantranony, ny fialam-boly dia mety ho - mampiroborobo ny zaridaina an-trano ary mitombo isan-karazany, izay azo amidy ihany.
Isan-taona dia mihamitombo ny lamaody ho an'ny fahasalamana ara-pahasalamana, ka ny fanatanjahan-tena dia mety ho lasa fialamboly tsara. Mifidiana torolalana izay tena hitondra fahafinaretana. Mety ho ny milomano, ny fitanana , ny fampiofanana ao amin'ny gym, ny hazakazaka, sns.
Fanangonana. Afaka manangona na inona na inona ianao, manomboka amin'ny kilalaon-java-bolo ary mifarana amin'ny vatomamy vita amin'ny vatomamy.
Lisitry ny torolàlana vitsivitsy izay azonao atao ny mifidy ny fialam-boly anao, koa aza mitsahatra mandra-pahitanao ny singanao.
Halako ny olona
Ahoana no hialana amin'ny fifohana sigara ary tsy mahazo lanja?
Ny fototry ny fivoaran'ny maha-olona
Niova ny toetry ny fahatsiarovan-tena
Ny fomba fisainana sy ny toetrany
Sakafo ao anaty lafaoro - fomba fitsaboana
Crown of Foamiran ho an'ny printsy kely
Ahoana no hamolahana volom-borona amin'ny lamba - fomba izay tsy fantatrao
Gavin Rossdail dia nanaiky fa manenina ny fisaraham-panambadiana avy amin'i Gwen Stefani
Ahoana ny fomba fanaovana akanjo misy akanjo?
Tao anaty efitrano fandriana
Hihaino tsy reflexive
Manamboatra ilay efitrano amin'ny vato miloko
Okroshka amin'ny kvass
Ahoana no fomba fitondra ny zaza vao teraka amin'ny fahavaratra?
Appetizer of tomatoes
Harona ho an'ny ririnina
Ny lamaody Eoropeana amin'ny lohataona 2013
Photoshoot ny tantaran'ny ririnina
Omelety misy voankazo